လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ | ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ | ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Kubota Group ၏ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု
အစားအစာ၊ ရေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေက လူသားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။
Kubota Group သည် ကမ္ဘာမြေနဲ့ လူသားများအတွက် လိုအပ်သော အစားအစာများ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သောက်သုံးရေရရှိရန်အတွက် ၄င်းတို့၏ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု၊ ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့် ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြု၍ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ကမ္ဘာမြေကြီးဖြစ်အောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Kubota Group သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရန် လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ရည်မှန်းချက်များ(Sustainable Development Goals) ကို ၂၀၁၅ ခုနစ်တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းက ချမှတ်ခဲ့ပြီး ရည်မှန်းချက်ပေါင်း ၁၇ ခုပါဝင်ပါသည်။ ထိုရည်မှန်းချက်များသည် Kubota Group ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီအား ရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ကမ္ဘာကြီးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်သွားဖို့ ကတိကဝတ်ပြုပါသည်။
Kubota ၏လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းမူဝါဒနှင့် လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း နောက်ထပ်လေ့လာရန် (Group Global Site)
Kubota Group သည် ၄င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်များကို အလေးထားသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်စေရေး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီ အစားအစာ၊ ရေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်သော လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၀ ၂၀၂၁
Kubota Myanmar Co.,Ltd. မှ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ အလှူငွေထည့်ဝင်ခြင်း
Kubota Myanmar Co.,Ltd. သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ (တစ်သိန်းငါးသောင်း) တိတိ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။